Raha ny hevitro mikasika indray an’ilay tsy mbola fivoahan’ny daty sy lalàm-pifidianana hitondrana ny fifidianana dia politikan’ny mpitondra ankehitriny mikajikajy tetika hafa no tsy amoahany an’io. Izaho anefa tsy matahotra ny politika rehetra misy fa « mission » avy any ambony no hotanterahako ka tsy misy « problème » izay paipaikady ataon’ny sasany any. Izaho no tena atahorana ka izay hanao 2è tour amiko eo dia hahita raharaha tokoa.
« Raha ny fijeriko ny fivoizana ny « emergence » etsy sy eroa indray dia hoy aho hoe : « Efa ela isika Malagasy no tokony ho « pays emmergent » fa ny olona tsy mba maka tahaka an’i pasitera Mailhol. Ny ahy mantsy dia ny ampahafolon’ny haren’ny firenena ihany no alaiko fa ny 90% kosa dia homena ny vahoaka avokoa fa ny an’izay nitondra teo dia mifamadika amin’izay ka ny ampahafolom-pananana fotsiny no mba hatolotra ny vahoaka fa ny 90 % azy ireo avokoa, hoy izy.
Ntsoav ina Evariste